Achọrọ Ihichapu Ozi Ntuziaka Site na Google Analytics gị? - Ndụmọdụ ọkachamara na Semalt
Ọ bụrụ na ị na-ezigara ozi ọma, ọ ga - abụ nsogbu kachasị njọ n'ụbọchị ndị a. Ruo ọnwa ole na ole, ọ wakpowo ọtụtụ ọnụọgụ weebụ ma mee ka nsogbu dị iche iche dị na webmasters dị iche iche. Ya mere, ọ dị mkpa ka anyị niile zere ma mezue usoro nke ijikwa na ịmepụta spam ozi iji mee ka Google na ndị ọzọ engines na-achọ nyere anyị aka melite ogo nke weebụsaịtị anyị.
Ọ nwere ike ọ gaghị adịrị mfe ịwepụ ihe gbasara spam na-ezigara dị ka ọtụtụ ndị na-achọ ihe ngwọta dị mgbagwoju anya. Artem Abgarian, Onye Ọrụ Kasị Enyemaka nke Ọkachamara , na-emesi obi ike ebe a na ọ dịghị anwansi na ị ga-ewepụ aka ntinye aka site na Google Analytics aka na nwayọ.
Google ekwenyela na spam na-ezigara ya dịka otu n'ime nsogbu ndị isi - ray ban 3517 rose. O di nwute, enweghi ihe ngwọta nke di ugbu a, na-ahapụ ndị nwe ụlọ ebe ha na ya ga-aga.
Nsogbu kachasị njọ bụ na ọ fọrọ nke nta ka saịtị niile na-ata ahụhụ site na spam na-ezigara n'otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ. Nchịkọta Google na-enye anyị ohere enyemaka ebe anyị nwere ike ịnye mkpesa maka nsogbu ahụ, mana enwere ike ịnweta ụfọdụ ngwọta na ntụpọ ahụ. Ndị na-ere ahịa na ndị webmasters na-echegbu onwe ha n'ihi na ọ dịghị ụzọ ha ga-esi wepu spam gbasara. N'ụzọ dị nro, enwere mgbochi ụfọdụ nke onye nwere ike ịhọrọ iji wepụ, kwụsị ma wedata spam ntinye aka na akụkọ Google Analytics.
Block Known Bots na Spiders
Afọ ole na ole gara aga, Google kwupụtara ọkwa ọhụrụ iji gbochie spiders na bọtịnụ a maara. Ịhapụ ha site na nchịkọta Google Analytics gị nwere ike imeziwanye okporo ụzọ. Site na nhọrọ a, webmasters nwere ike wezuga ma ọ bụ ikpochapụ nke ọma usoro ụzọ ụgbọ mmiri. Iji mee ka nhọrọ a rụọ ọrụ, ị ga-ewepụ ma gbochie adreesị IP nke i nwere ike iche n'echiche. Otu n'ime ihe ndị bụ isi nke usoro a bụ na ị gaghị enwe ike ịchọta ihe ole na ole bọọ na spiders rutere n'ebe nrụọrụ weebụ gị dị ugbu a.
Block Referral Spam site .htaccess
Ịgbachi spam na-ezigara site na faịlụ .htaccess nwere ike. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ na saịtị gị na Apache, ọ gaghị ewe oge iji gbochie spam na-ezigara gị n'ihu akaụntụ gị Google Analytics. Ị ga-egbochi spam na-ezigara site na faịlụ a ma dezie ya dị ka faịlụ nkịtị iji meziwanye ọnọdụ okporo ụzọ gị.
Nchikota Anya Ntuziaka
Ị ghaghị igbochi ndị na-agwa ndị mmụọ ma ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ site n'ọtụtụ buru ibu nke hits. Ndị na-ahụ maka mmụọ nwere ike imebi ọkwa gị na nchịkọta ọchụchọ. Ha na-akpata nsogbu site na nyochaa koodu ha kpọmkwem na akaụntụ Google Analytics n'enweghị ikike gị.
Block Fake Referrals and Dodgy Crawlers
Ị nwere ike igbochi ndị na-ekwu okwu ụgha na dodja crawlers na akaụntụ Google Analytics gị. Iji mee nke ahụ, ị ​​ghaghị ịmepụta ihe nzacha maka ngalaba ma ọ bụ subdomains nke spam na-emetụta. N'ụzọ dị mwute, enwere nkwụsị na Google Analytics banyere ọtụtụ nzacha ị nwere ike ịmepụta kwa ngalaba. Enwere ike ịmepụta ọtụtụ nzacha ya ka ị wee nwee ike ịmepụta ha na ọtụtụ ndekọ. Maka weebụsaịtị a ma ama, ọ nwere ike ịbụ usoro na-aga n'ihu, mana ọ bụghị usoro na - adịgide adịgide ma ọ bụrụ na saịtị gị dị ọhụrụ.